အဖြည့်ခံ အနင်းခံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အဖြည့်ခံ အနင်းခံ
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Feb 7, 2012 in Myanma News, News | 19 comments
2 မကြောက်မရွှံ့ကားနားလေးကို ဇွတ်အတင်းကပ်တောင်းတာပါ
3 မပေးဘူးဆိုရင်လဲမရ ဇွတ်
မန်းလေး 35လမ်း ကုန်းကျော်အရှေ့ဘက်မီးပွိုင့်မှာ။
26ဘီလမ်း လမ်း80ကမီးပွိုင့်မှာ ။
ဗြုန်းကနဲကြည့်ရင်တော့ ဒီကလေးတွေကို အပြစ်မြင်စရာ။
သူ့တို့ကိုဘဲ စိတ်ပျက်စရာ အမြဲတွေ့နေရတာကိုး။
တကယ်တော့ ဒီကလေးတွေရဲ့မိဘတွေက ခိုင်းတာဖြစ်သလို
တကယ်ပပျောက်စေချင်ရင် ဒီကလေးတွေကို ဖမ်းဆီးလိုက်ရုံနဲ့မပြီးပါဘူး။
ဒီကလေးတွေလာချိန် ပြန်ချိန်ကိုစောင့် ပြီး သူတို့နောက်ကွယ်ကလူကို
သူုတို့နောက်ကွယ်မှာရှိနေ ထိန်းချုပ်နေတဲ့လူကို မိအောင်ရှာပြီး အမြစ်ပါ ပါစေချင်တာပါ။
ကျနော်တို့က သတင်းတစ်ခုပေးလိုက်ရင် အဆုံးထိပါအောင် နှိုက်နိုင်စေချင်ပါတယ်။
အဓိက ကတော့ အားလုံးကို ကောင်းစေချင်တာပါဘဲ။
ကောင်းဘို့အတွက်က အပေါ်ယံသပ်ချနေလို့ကတော့ အလကားပါဘဲ။
အမြစ်ကပါနုတ်ပစ် သင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။.
ဟုတ်တယ် လေးပေါက် သူတို့ခဗျာကို နောက်ကနေ ကြိုးကိုင်တဲ့သူတွေ ရှိနေတာကို အရင်ဆုံး မိအောင်စုံစမ်း အပြစ်ပေးသင့်တယ် မိဘ (သို့) ဆွေမျိုးတွေ တစ်ချို့က ကလေးတွေ မွေးစားပြီး ခိုင်းစားတာတွေ ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ် အဲဒီလို လူမျိုးတွေကို အရင်ဆုံးဖမ်းဆီး အရေးယူသင့်တယ်
ကျွန်တော်ကတော့ … အပြည့်ခံ၊ အနင်းခံ လို့ ပြောခွင့်ပေးပါနော်။
သူတို့လေးတွေကို နောက်ကွယ်က ခိုင်းနေတဲ့ သူတွေက ခွက်မှာ “အပြည့်ခံ” ခိုင်းတယ်ဆိုပဲ။ မရရင် ရိုက်ခံရတာတို့ ထမင်းမကျွေးတာတို့ ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
မန္တလေး ဘူတာကြီးနားမှာ တောင်းတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို တောင်းလို့ရအောင် ရေနွေးပူနဲ့ လောင်းပြီး ဒဏ်ရာပြတောင်းခိုင်းဆိုဗျ။
နောက် သူတို့တွေက ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေကြားမှာ ခြေထောက် ဘီးအောက်ဝင် “အနင်းခံ” ပြီးတောင်းတာလဲ ရှိနေတယ်။
အခုတစ်လော ကားဂိတ်တွေမှာလည်း အဲ့လို ကလေးတွေ လိုက်တောင်းနေတာ ပိုဆိုးနေတယ်
တစ်ခါတုန်းကလည်း ကားဂိတ်မှာ လေးနှစ်အရွယ်ကလေးလေးကို လိုက်တောင်းခိုင်းနေတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်
အဖေလို့ ယူဆရတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ကတော့ ကလေးနဲ့ မလှမ်းမကမ်းကနေလိုက်ပြီး ကြည့်နေတယ်လေ
သနားစရာကောင်းလိုက်တဲ့ကလေးတွေ အဲဒီလိုကလေးတွေ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေမယ်မသိဘူး
ဒါပေမယ့် ခိုင်းစားတဲ့သူက မိဘဖြစ်နေရင်တော့ ဥပဒေအကြောင်းနားလည်တဲ့သူက ရှင်းပြပေးပါလား
အထူးသဖြင့် ကူညီပါရစေဆိုတဲ့ နှမစောင်းတွေ..
ဒီခလေးတွေနောက်မှာ ကြိုးကိုင်တောင်းခိုင်းတဲ့ လူတွေ..မိဘတွေကို အရေးယူသင့်တယ်..
သတောင်းစား အမှုလိုက်လို့နေ့ တွက်မကိုက်ဘူးဆိုပြီး အေဘေးတွေ ဒီတိုင်း ထိုင်ကြည့်နေတာ…
ဒီအလုပ်က မင်းတို့ လုပ်ရမဲ့အလုပ်ကွ.
သောက်ဆံနောက်လိုက်ပြီး ဆပ်ကြေးကောက်ဖို့ ပဲ ချောင်းမနေနဲ့အေဘေးတွေရဲ့
(ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ သိဘူး..ကြည့်မရတာနဲ့ ..ဂွင်ထဲဝင်တုန်းဆရာလုပ်ရတာ အေဘေးတွေရဲ့ )
သဂျီးရေ ဒီမှာဆဲနေပြန်ပြီ Aဘေးတဲ့
တူ ဆဲတာ မဟုတ်လောက်ဘူး။
ထိပ်ဆုံးမရောက်မဲ့ ကောင်တွေလို့ ပြောတာနေမှာ
A က ထိပ်ဆုံးမှာ ဆိုတော့ ထိပ်မရောက်မဲ့ ဘေးကကောင်တွေလေ ၊A ရဲ့ ဘေးဆိုလို့လေ ၊ ဟုတ်လားဟင် စိန်ပေါက်
ဒီလိုတောင်းနေတဲ့ သူတွေကို အရေးယူလို့ မလွယ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဆိုပဲ။
အလုပ်ပေးရင်လည်း ပြေးကြတယ်၊ ဝင်ငွေ မကောင်းလို့ ဆိုဗျ။
ရဲကလည်း ကလေးတွေဆို ဖမ်းလို့မရ၊ လူငယ်စခန်းတွေ ပို့ရင်လည်း ပြန်ပြေးကြ ဆိုသဗျ။
ကျမလည်း အဲ့လိုပဲ ကြားတာ ။ ပြောရရင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နုနုနယ်နယ်လေးတွေကို စိတ်ဓာတ်လေးတွေဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာ ။ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း တကယ့်ကို အစကနေ အဆုံးအထိ ရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့ ကို စစ်ဆင်ရေးတခုလို နိုင်ငံတော်က လုပ်ပေးရင်တော့ ဒီကိစ္စလုံးဝ ပပျောက်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။ တကယ်လုပ်ရင် အဟုတ်ဖြစ်မှာပါ။
လေးပေါက်ရေ စိတ်ကူးလေးတွေ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ အာဇာနည်ကုန်းကြီးကို ပြန်ပြင်တော့မှာဆိုတော့ လေးပေါက်ပစ်လိုက်တဲ့ခဲ့တလုံးကတော့ မှန်သွားပါပြီ။ ၀မ်းသာစရာပါ။
ကျနော့်အသိကောင်လေး အဲလိုလမ်းဘေးက ကလေးတွေခေါ်
စရိုက်ဗျ…. စရိုက်…။ တစ်ချို့ကလည်းပြောကြတယ်…။ သန္ဓေ ကိုက မကောင်းဘူးဆိုတာလေ…။ ကျွန်တော်လည်းတွေ့ဖူးတယ်..။ သူတို့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကိုက ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ေါပ့ စားနဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတာ စည်းနဲ့ ကမ်းနေ နေရတဲ့ နေရာမှာ ဘာတွေပဲရရ မပျော်ပိုက်ကြတော့ဘူး ဗျ….။
သူတို့ အဖေအရင်းဆိုတဲ့ အေဘေးတွေက ဘယ်ရောက်နေကြလဲ သိဘူးဗျ။
မင်းကလဲ အ ရန်ကော။
သူအဖေက သူတို့သားသမီးကို ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးသမားများလို
ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ အငှားခိုင်းတာဖြစ်ဖြစ် အဖေအမေခိုင်းတာဖြစ်ဖြစ်